Greatness for the people of Zimbabwe - Opera News
Greatness for the people of Zimbabwe
The ZBC news used its Twitter channel to reveal about the 500 000 doses of the Sinopharm Covid-19 vaccines that were donated to Zimbabwe by China .They arrived at the Robert Gabriel Mugabe International Airport and brought the total to a million.
This is the total number of vaccines that have been donated to Zimbabwe by China to date.China has been so helpful to Zimbabwe in the battle against the Covid-19 pandemic. China has been used as the main supplier of Covid-19 vaccines to Zimbabwe. It is great that the country has even received a total of a million Covid-19 vaccine doses to date , hence helping the country make some savings.The vaccination drive is still ongoing in Zimbabwe and it is a matter of time before the herd immunity is reached .The pandemic has had negative impacts on the lives of people in Zimbabwe and the vaccination drive is a step towards returning the country to normality.
China Covid-19 ZBC Zimbabwe